Siyaasadda Khaaska ah, OffshoreCompany.com
Asturnaantaada ayaa muhiim noo ah. Waxaan mudnaanta weyn u haynaa inaan ku ilaalino macluumaadkaaga shakhsiyeed qarsoodi ah.
Markaad soo gasho ama aad isticmaasho websaydhka OffshoreCompany.com, waxaad ogolaatay siyaasadda asturnaanta OffshoreCompany.com sida hoos ku xusan.
Taariikhda la beddalay: 20th May 2018
Asturnaantaada waa muhiim.
Macluumaadka shakhsiyadeed ee aanu ururinayno, haddii aad siiso, ayaa loo isticmaali doonaa inay kula soo xiriiraan, waxay kuu soo diraan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan alaabtayada iyo adeegyadeena, inay bixiyaan adeega oo ay bixiyaan macluumaad dheeraad ah marka la codsado.
Markaad naga siiso macluumaadkaaga ujeeddooyinkan, waxaad ogolaaneysaa ururintayaga iyo wax qabadkeena.
Macluumaadkaaga kuma wadaagno cid saddexaad
Adigoo booqanaya boggayaga, adoo soo gudbinaya foomamka internetka wixii macluumaad dheeri ah ama si aad u iibsatid adeeg, adiga oo bixinaya macluumaadkaaga xiriirka ee emailka, waxaad ogolaaneysaa ururinta iyo ka shaqeynta macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ee lagu aqoonsan karo, PII, sida halkan lagu qeexay.
Xakamaynta xogta guud ee Ilaalinta Macluumaadka (GDPR) waa Adeegyada Guud ee Shirkadaha, Inc.
Macluumaadka Waxaad Milyan Bixineysaa Maadada GDPR
Macluumaadka la aqoonsan karo ee laga yaabo inaad bixiso waa inaad dalbataa adeeg, dalbasho faahfaahin dheeraad ah oo aad heshid cusbooneysiin sharciyeed oo muhiim ah adoo adeegsanaya foomka internetka www.offshorecompany.com.com (bogga internetka), adoo na soo diraya, adoo wacaya telefoonka, isticmaal boostada ama haddii kale nala soo xiriir.
Macluumaadka shakhsi ahaaneed ee lagu aqoonsan karo ee aad bixiso waa magacaaga iyo macluumaadka xiriirka, shuruudaha dukumeentiga sharci ee adeega amar bixinta, macluumaadka lacag bixinta ee amarada adeegga, macluumaadka maraakiibta loogu talagalay soo gudbinta dalabka iyo dhammaan meelaha loo baahan yahay si loo buuxiyo oo loo diiwaangeliyo dukumentiyada, sida; macluumaadka cusub ee shirkadda, macluumaadka cusub ee kalsoonida iyo shuruudaha kale ee sharciga ee la xiriira.
Waxaa naga go'an inaan fulino GDPR (article 5)
Macluumaadka shakhsiyeed waa:
si habboon loo shaqeeyo, si cadaalad ah iyo habdhaqan hufan oo ku saabsan mawduuca xogta ('sharciga, caddaaladda iyo daahfurnaanta');
loo uruuriyay ujeedooyin cayiman oo sharci ah oo aan la sii wanaajin hab aan ku habooneyn ujeedooyinkaas; Hawlaha dheeraadka ah ee loogu talagalay ujeedooyinka aruurinta ee danaha dadweynaha, ujeedooyinka cilmi baarista ama taariikhda ama ujeedooyinka tirakoobku waa, sida waafaqsan Qoddobka 89 (1), looma tixgelinayo inaysan udhigin ujeedooyinka hore ('xaddidaadda ujeeddada');
ku filan, ku habboon oo ku xaddidan waxa lagama maarmaanka u ah ujeeddooyinka loo xilsaaray ('' data minimization ');
sax ah iyo, hadday lagama maarmaan noqoto, ilaa iyo taariikhda; talaabo kasta oo macquul ah waa in la qaadaa si loo hubiyo in macluumaadka shakhsiga ah ee aan sax ahayn, oo la tixgelinayo ujeeddooyinka loo xilsaaray, la tirtiro ama loo saxo daahitaan la'aan ('saxsanaanta');
lagu hayo qaab kaas oo u ogolaanaya aqoonsiga maadooyinka xogta aan ka dheereynin baahida loo qabo xogta shaqsiyadeed ee shaqeynaya; Macluumaadka shakhsi ahaaneed waxaa lagu kaydin karaa waqti dheer muddo dheer maaddaama macluumaadka shakhsi ahaaneed loo baari doono oo keliya ujeedooyinka diiwaangelinta ee danaha dadweynaha, ujeedooyinka cilmi baarista ama taariikhda ama ujeedooyinka tirakoobka sida waafaqsan Qodobbada 89 (1) oo ku xiran hirgelinta farsamada iyo ururinta haboon tallaabooyinka looga baahan yahay Nidaamkan si loo ilaaliyo xuquuqda iyo xoriyada mawduuca xogta ('limitation storage');
waxaa loo hirgeliyaa qaab hubaal ah oo sugaya ammaanka haboon ee xogta shakhsi ahaaneed, oo ay ka mid tahay ilaalinta ka hortagga aan la oggolayn ama sharci-darrada ah iyo ka lumitaanka shilalka, burburinta ama waxyeellada, iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka farsamada ama ururada ('sharaf iyo qarsoodi').
Waxaan isticmaalnaa nidaamyada macluumaadka shirkadaha hadda jira si loo ilaaliyo macluumaadka macaamiisha oo lagu taageeray amniga casriga casriga ah iyo maamulaha nidaamka loo qoondeeyey Ururkayagu wuxuu leeyahay "Sarkaalka Badbaadinta Macluumaadka DPO" ee la gaari karo iyada oo la adeegsanayo page xiriir ee boggan.
Waxaanu adeegsaneynaa bixiyeyaasha saddexaad si aan ugu martigelinno boggayaga internetka oo aan bixinno isgaadhsiinta, maraakiibta, qaansheegadka / xisaabinta iyo bixinta lacagta
Waxaan u adeegsanaa hababka qiyaasta warshadaha, habdhaqanka ugu fiican iyo furfurista meel kasta oo suuragal ah marka la helo, diro oo lagu xafido macluumaadkaaga.
Adiga oo bixinaya macluumaad shakhsiyeed, waxaad ku raacsan tahay tan.
Macluumaadka aan ururino markaad booqaneyso boggeena:
cinwaankaaga IP, browser, nidaamka hawlgalka iyo nooca kombiyuutarka oo leh faafin, fiilooyin iyo macluumaadka qalab kale
sida aad u heshay boggayaga internetka, taariikhda iyo wakhtiga aad booqanayso boggayaga internetka iyo waxyaalaha ku saabsan mawduuca aad aragto, macluumaadka bogga iyo macluumaadka mashiinka raadinta.
Waxaanu u soo bandhigi doonnaa macluumaadkaaga kaliya ogolaanshahaaga ama inaad u hoggaansamto sharciyada xukunka ama amarada maxkamada.
Haddii aad soo gudbiso foomka xiriirka boggayaga internetka, meelaha aad soo gudbiso waxaa loo diraa adeegga SalesForce ee adeega CRM iyo adeegga maareynta waraaqaha ee MailChimp. Kuwani waa GDPR waafaqsan nidaamyada xog-ururinta xogta saddexaad.
Haddii aad email ku soo wacdo, wac telefoonka ama haddii kale nala soo xiriir, waxaan ku soo jawaabi karnaa email-kaaga - adeegyadayada waxaa bixiya GoDaddy oo waxaan isticmaalnaa software email Microsoft. GoDaddy iyo Microsoft waa GDPR oo ku shaqeeya xog-ururinta xogta dhinac saddexaad.
Dhammaan qalabka wax lagu qoro ee aan isticmaalno waa GDPR
Google - Bixiyaha Shabakada Emailka iyo Websiteka
Microsoft - Email Bixiye Adeegaha
MailChimp - Bixiyaha Bixinta Email
SalesForce - Bixiyaha CRM
GoDaddy - Bixiyaha Guud ee Gawaarida iyo Bixiyaha
GoogleDrive - Xawilaadda Wareejinta / Kaydinta Kaydinta
Facebook - Bixiyaha Adeegga Suuqgeynta
Kombiyuutarka Ganacsi - Kombuyuutarka Lacag bixinta
Waxaanu kaliya u sheegi doonnaa macluumaadkaaga si waafaqsan sharciga ama shirkad / shirkad.
Macluumaadka aad bixisay waxaa loo isticmaalaa in laga buuxiyo shuruudaha codsiyada wixii macluumaad ah ama adeegyo ah, cusbooneysiiyey sharciyada caalamiga ah ee la xidhiidha, dhiirrigelinta iyo talooyinka.
Macluumaadka aan soo ururino waxaa loo isticmaalaa in lagu baro waxqabadkeena bogga iyo hagaajinta khibrada iyo adeegsiga khibradda, kormeerka kharashyada xayeysiinta iyo dadaalka iyo sidoo kale talooyinka bartilmaameedka ee xiisaha.
Macluumaadka saddexaad ee dhinaca waxaa laga yaabaa in lagu daro macluumaadka aad bixisay ama la ururiyey, in loo adeegsado si waafaqsan nidaamka sirta ah.
Xuquuqdaada hoos timaada GPDR
Xaqqa Macluumaadka - Xuquuqda aad u leedahay inaad weydiiso xogta shakhsi ee jira iyo sida loo isticmaalo.
Xuquuqda Helitaanka - Xaqa aad u leedahay inaad aragto xogtaada shakhsi ahaaneed.
Xaqqa Xakamaynta - Xaq u leeyahay inuu saxo oo wax ka bedelo haddii aan la cusbooneysiin.
Xaqqa inaad ka noqoto ogolaanshaha - Xuquuqda ah in la kansalo ogolaashaha ururinta iyo ka shaqeynta macluumaadka shakhsi ahaaneed.
Xuquuqda Diidmada - Xaq u lahaanshaha diidmada xogtaada shakhsi ahaaneed ee lagaa baaraandegayo.
Xaqa aad u leedahay in aad diidid farsamaynta autism - Xaqa aad u leedahay in aad diidid go'aanka lagu gaaro geedi socodka automated.
Xaqqa in la illoobo - Xaq u lahaanshaha codsigaaga in la tirtiro.
Xaq u yeelashada wax-qabadka xogta - Xuquuqda aad u leedahay inaad codsato wareejinta macluumaadkaaga - xogta waa in la siiyaa ama loo wareejiyaa qaab elektaroonig ah oo elektaroonik ah.
Mudo intee le'eg ayaan ku haynaa xogtaada?
Waanu sii wadi doonaa macluumaadka macaamiisha illaa inta ay lagama maarmaan tahay in la fuliyo amarka adeegga iyo fududeynta codsiyada iyo sidoo kale u hoggaansanaanta shuruudaha sharciga ah.
Nala soo xiriir ku saabsan in aad ka saarto macluumaadkaaga.
Shaac-bixinta by Minor hoos yimaada 16 sano jir
Ogolaanshaha Waalidka ayaa loo baahan yahay ka hor inta aanad naga helin macluumaadkaaga shakhsiyeed.
La xiriir xafiiskayaga oo tilmaantan tani waa codsi dib looga noqodo ogolaansho ah ururinta iyo ka shaqeynta macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed.
Codsiga Gaarista Maadada (SAR)
Sida waafaqsan GDPR,
waxaad codsan kartaa inaan kuu soo dirno faahfaahin ku saabsan wixii macluumaad shakhsi ah ee aan hayno, ama
waxaad codsan kartaa in aan hagaajino wixii isbeddel ah, ama
waxaad naga codsan kartaa inaan tirtirno dhammaan macluumaadkaaga.
Sida waafaqsan GDPR, dhammaan codsiyada gundhiga waxaa lagu siiyaa bilaash  maalmood gudahood.
Wixii su'aalo ah oo la xidhiidha xogtaada, ama inaad soo gudbiso codsiyada, fadlan nagala soo xiriir:
Adeegyada Guud ee Shirkadaha, Inc
Taleefanka: + 1 (800) 959-8819
Siyaasadaha saddexaad ee xisbiga
Waxaanu kaliya masuul ka nahay siyaasadeena gaarka ah ee gaarka ah.
Waxaa laga yaabaa inaan isku xirno bogag kale. Waxaa muhiim ah in la eego siyaasadahooda asturnaanta waxayna hubiyaan in boggaga kale ee GDPR waafaqsan yahay ka hor inta aan loo dirin macluumaadka shakhsiyeed.
Ma aqbalno wax mas'uuliyad ah ama masuuliyad ah oo ku saabsan maaraynta arrimaha gaarka ah ee dhinacyada saddexaad.
Kukiyada waxaa loo isticmaalaa ogolaanshahaaga, waxay yihiin faylal yar oo kombiyuutarkaaga kuu aqoonsanaya adiga boggayaga.
Noocyada koobiyooyinka ee aan isticmaalno
Analytics Website: waxay bixisaa tirada dadka martida ah, helitaanka taraafikada iyo habdhaqanka content si loo horumariyo suuqgeyntayada iyo waayo-aragnimada user.
Bartilmaameedka Xayeysiinta: diiwangelinta tallaabooyinka laga qaadayo boggayaga internetka sida waxyaabaha aad codsatay iyo xiriiriye aad gujiso. Waxaan u isticmaali karnaa si aan u hagaajinno macluumaadka iyo farriimaha boggeena iyo alaabta.
Kukiyada saddexaad ee loo yaqaan "cookies" oo laga yaabo in lagu dhigo boggayaga internetka:
Google Analytics wuxuu ururiyaa macluumaad aan shakhsiyeed ahayn oo ku saabsan isticmaalka shabakada iyadoo loo eegayo siyaasadeeda gaarka ah: www.google.com/policies/privacy/
Cookie-ka-Dib-u-eegista Google wuxuu bixiyaa hab lagu yareeynayo waxyaabaha laguugu soo diray adiga oo ku saleysan taariikhda aad booqanayso boggeena. Waxaad ka saari kartaa tan tan ku jirta Google Ad Settings.
SalesForce waa nidaamkayaga CRM-ga, kakoobiyadu waxay noo oggolaanaysaa in aan maareyno xiriirka macaamiisha wixii ku saabsan codsiyada macluumaadka iyo amarada adeegga.
Wordfence waa Caymiska Amaanka ee WordPress oo isticmaalaya cookie si loo go'aamiyo haddii aad tahay qof bini aadam.
Facebook Pixel waxay bixisaa falanqaynta taraafikada shabakadda si loo qiyaaso waxqabadka adeegga
Waxaad xakameyn kartaa cookies adigoo bedelaya barta shabakadaada.
OffshoreCompany.com waa shirkad ganacsi oo aan ahayn shirkad sharci. Ma bixin karno talo sharciyeed ama maaliyadeed.
Haddii aad qabto wax su'aalo ah, welwel, ama faallooyin ku saabsan siyaasadaha asturnaanta asturnaanta ama ficillada, waxaan jeclaan lahayn inaan ogaano waxa ay yihiin si aan wax uga qabano. Fadlan nagala soo xariir 1-800-959-8819.